ာသီကြို အပိတ် ခြေစမ်းပွဲမှာ ခြင်္သေ့ပြာတို့ နိုင်ပွဲဆက်မှု ရပ်တန့်ခဲ့ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၂ – ၂ တော့တင်ဟမ် ပွဲမှ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ချက် - SPORTS MYANMAR
ာသီကြို အပိတ် ခြေစမ်းပွဲမှာ ခြင်္သေ့ပြာတို့ နိုင်ပွဲဆက်မှု ရပ်တန့်ခဲ့ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၂ – ၂ တော့တင်ဟမ် ပွဲမှ ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ချက်
By Edi Tor August 5, 2021
မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ Mind Series ရန်ပုံငွေ ခြေစမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ် တပွဲ ဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး – တော့တင်ဟမ် ပွဲကို စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ကစားခဲ့ရာ ၊ တဖက် ၂ဂိုးစီ သရေ ရလဒ်နဲ့ ပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုပွဲအပြီး ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၅ချက်ကို အခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ။
၁ ။ အလင်းနှစ်လောက် ကွာခြားနေတဲ့ လန်ဒန် အင်အားကြီး ၂သင်း အကြားက အောင်မြင်မှု
လက်ရှိ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့ ကွန်းဖရန့်စ်လိဂ်သာ ဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်းတို့ အကြား အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အတွက် သာမက ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်း သက်တမ်း ကာလ တလျှောက်မှာပါ မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားနေပါတယ် ။
ကစားသမား အင်အားချင်း ၊ အရည်အသွေးချင်း ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း နေရာ တော်တော်များများမှာ ချဲလ်ဆီး ဟာ တော့တင်ဟမ်ထက် သာလွန်နေပါတယ် ။ လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ လာမယ့် ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်ပေမယ့် ၊ တော့တင်ဟမ် ကတော့ အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုသာ ပစ်မှတ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့ညက ပွဲရလဒ် အကြောင်း သုံးသပ်ရရင်တော့ ၂ဂိုး အရှုံးရလဒ် ကနေ ပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ ကြိုးစားမှုကို ချီးကျူးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ချဲလ်ဆီးဖက်က ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ မြောက်မြားစွာသော အခွင့်အရေးတွေကို ဂိုးအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာက ရလဒ်ကို မပြတ်သားစေခဲ့ပါဘူး ။
ဒီတော့ တော့တင်ဟမ် နည်းပြသစ် နူနို ဆန်တို အနေနဲ့ မနေ့ည က ပွဲရလဒ်ကို ကျေနပ် တင်းတိမ်နေလို့ မရတဲ့အပြင် ၊ အသင်းသားသစ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ဘယ်လို စနစ်တကျ အသုံးချရမလဲ ဆိုတာ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုနေပါတယ် ။
၂ ။ ရာသီကြို ပြင်ဆင်မှုမှာ တောက်လျှောက် တောက်ပနေတဲ့ ဇီယက်ချ်
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေတတွင်းလုံး နိုင်ငံ အသင်း အတွက် ကစားပေးစရာ မရှိခဲ့တာကြောင့် မော်ရိုကို တောင်ပံ ကစားသမား ဟာကင် ဇီယက်ချ် ဟာ ရာသီသစ် အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုမှာ အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်ပေးထားနိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။
ပီတာဘရော့နဲ့ ကွင်းပိတ် ခြေစမ်းပွဲကစ ၊ မနေ့ည က တော့တင်ဟမ်နဲ့ ပွဲအထိ ဇီယက်ချ် ဟာ ပွဲထွက်ခွင့် တောက်လျှောက်ရခဲ့ပြီး ၊ နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ အလေးပေးခြင်းကို အပြည့်အဝ ခံယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပွဲတိုင်းမှာ ဇီယက်ချ် ဟာ ကြိုးစား အားထုတ်မှု အပြည့်နဲ့ ကစားခဲ့ကာ ၊ မနေ့ညက ပွဲမှာလည်း ဂိုး၂ဂိုး သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
၃ ။ ဆွန်ဟောင်မင် ဟာ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ အထောင် တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်လာမလား ?
အခုအချိန် အထိ တော့တင်ဟမ် အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်ကို ပျက်ကွက်နေပြီး ၊ မန်စီးတီး အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ချင်နေတဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ ကလပ်ဖက်က အခုအချိန် အထိ မကြိုးစားရသေးပေမယ့် ၊ နူနို ဆန်တို ကတော့ မနေ့ည က ပွဲမှာ တောင်ကိုးရီးယား တောင်ပံ ကစားသမား ဆွန်ဟောင်မင်ကို အထောင် တိုက်စစ်နေရာမှာ ထားကာ ၊ False9ပုံစံနဲ့ ကစားစေခဲ့ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် False9ပုံစံနဲ့ မရင်းနှီးနေတဲ့ အတွက် ဆွန် ဟာ မနေ့ညကပွဲမှာ အတော်လေး ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ၊ ချဲလ်ဆီး နောက်တန်းရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တဖက်မှာ မကြာသေးခင်ကမှ နှစ်ရှည် စာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ၊ ကိန်းသာ အသင်းပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် တော့တင်ဟမ်တို့ ဆွန် ကိုသာ အားထားရဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
၄ ။ Ballon D’Or စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ကန်တေ
မနေ့ည က သရေပွဲဟာ ဒုတိယပိုင်းမှာ ကန်တေကို လူစားလဲခဲ့တာကြောင့်လို့ ပြောရင် လွန်မယ် မထင်ပါဘူး ။ အသက် ၃၀ အရွယ် ရှိလာပေမယ့် ၊ ကန်တေ ဟာ တကွင်းလုံး မရပ်မနား ကစားပေးခဲ့ကာ ၊ တော့တင်ဟမ်ဖက်က ဆင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး လမ်းကြောင်း မှန်သမျှကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်တောက်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရိုမှာ ပြင်သစ် အသင်းနဲ့ အတူ မအောင်မြင်ခဲ့သည့်တိုင် ကန်တေ ဟာ Ballon D’Or ဆုရဖို့ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၊ လာမယ့် အပတ်မှာ ကစားမယ့် ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲ အတွက် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
၅ ။ ဒေလီ အလီရဲ့ လားရာက ဘယ်လဲ ?
မော်ရစ်စီယို ပိုချက်တီနို လက်ထက်မှာ အလီ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အတောက်ပဆုံး ကြယ်ပွင့် တဦး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို လက်ထက်မှာ အပယ်ခံ ကစားသမားသာသာ အဆင့်သာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
အခုတခါ နူနို ဆန်တို ကတော့ အလီကို ဘယ်လို အသုံးချမှာလဲ ? မနေ့ည က ခြေစမ်းပွဲမှာတော့ ဆန်တိုဟာ အလီကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၊ ဟယ်ရီကိန်းသာ အသင်းပြောင်းခဲ့ရင် ၊ အလီ ဟာ ၎င်းရဲ့ ဝှက်ဖဲ တချပ် ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာ ကြိုမှန်းလို့ရပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီတုန်းက ဆရာဟောင်း ပိုချက် ပီအက်စ်ဂျီသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အသံတွေ ညံခဲ့ပေမယ့် ၊ အခုအခါမှာတော့ ၎င်းဟာ မြောက်လန်ဒန်ကို စွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မော်ရင်ဟို လက်ထက်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ အလီ အစွမ်းအစတွေ ဒီရာသီမှာ ပြန်မြင်တွေ့ရမလား ဆိုတာ မကြာခင်မှာပဲ သိရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။